Amisom oo ku adkeysatay shuruud adag oo ay DF ugu wareejineyso amniga - Caasimada Online
Home Warar Amisom oo ku adkeysatay shuruud adag oo ay DF ugu wareejineyso amniga
Amisom oo ku adkeysatay shuruud adag oo ay DF ugu wareejineyso amniga
Muqdisho (Caasimada Online) – Jeneral Charles Tai Gituai oo ah ku-simaha xilka Taliyaha Guud ee Ciiddanka AMISOM dhalasho ahaana kasoo jeeda dalka Kenya ayaa shaaca ka qaaday in AMISOM ay ka fiirsan doonto qorshaha lagu doonaayo in amniga Somalia loogu wareejiyo ciidamada Somalia.
Jeneral Charles Tai Gituai, waxa uu sheegay inuu hadda socdo qorshaha ciidamada AMISOM looga saari lahaa Somalia, hase ahaatee ay muhiim tahay in Somalia ay kasoo baxdo shuruudaha.
Jeneral Charles Tai Gituai , waxa uu tilmaamay in mudada loo qabtay ee la doonaayo inay kaga baxaan Somalia ay tahay sannadka 2020-ka, iyadoo inta aan la gaarin la doonaayo in xal loo helo shuruudaha ciidamada loogu wareejin lahaa amniga.
Jeneral Charles Tai Gituai, waxa uu cadeeyay in Ciiddanka AMISOM ay diyaar u yihiin inay dhigooda Somalai ku wareejiyaan Sugidda Ammaanka Guud ee dalka, isla markaana mudada u harsan ay sii tusaan hanaanka amniga.
Ku-simaha ciidamada Jeneral Charles Tai Gituai, waxa uu intaa ku daray inay aad ugu kalsoon yihiin shaqooyinka ciidamada Booliska Somalia, waxa uuna xusay inay Booliska haystaan Xabsiyo, Nidaam Garsoore oo shaqeynaya, Dugsiyo iyo Xarumo Caafimaadba leh.
Jeneral Charles Tai Gituai, ayaa ku celcelshay in Somalia laga doonaayo fulinta shuruudaha lagu xiray, waxa uuna cadeeyay intaa kadib ay suuroobeyso inay wareejiyaan amniga Somalia.
Si kastaba ha ahaatee,shuruudaha laga doonaayo Somalia ayaa waxaa kamid ah inay buuxiyaan Hanaanka ciidan, tababarada iyo inay ciidamadu heystaan khibrad ay ku maareynkaraan shaqooyinkooda.